I Masindahy Hilaire de Poitiers no tsaroana amin'izao 13 janoary izao. Teraka tao Aquitaine ny taona 310 i Masindahy Hilaire, mpanompo sampy ny fianakaviany ary taranak'andriana gallo-romain izy. Araka ireo tahirin-kevitra amin'ireo asa sorany, rehefa nitady ny marina izy ka nifanerasera tamin'ny Baiboly dia nibebaka ka nangataka hatao batemy ny taona 345.
mpamnatry ny fiangonana
Masimbavy Tatiana (Tatienne)
I Masimbavy Tatiana de Rome na i Tatienne no tsaroana ny 12 janoary. Niaina tamin'ny taonjato faha-3 i Tatiana na i Tatienne. Consul romain ny rainy, tsara tarehy tokoa i Tatiana. Niara-nivavaka tamin'ireo mahantra izy na dia nanana sy zanaka manam-boninahitra aza.
Pejy 37 amin'ny 40